COVID-19: ANTONTAN’ISA NY 11 JONA 2021 - ewa.mg
COVID-19: ANTONTAN’ISA NY 11 JONA 2021
News - Santé - COVID-19: ANTONTAN’ISA NY 11 JONA 2021
Hialana tsiny indrindra ny fisian'ny teny frantsay rano iray ato amin'ity lahatsoratra : « COVID-19: ANTONTAN’ISA NY 11 JONA 2021 » ity fa nisafidy izahay ato amin'ny ewa.mg ny hampiseho azy satria saropady ny aretina Coronavirus ka tokony ho fantatry ny mpiray firenena izay mombamomba azy.
Isan’ny nanaovana fitiliana: 275
Tranga vaovao: 25
Tranga misy fahasarotana: 95
Namoy ny ainy: 03
L’article COVID-19: ANTONTAN’ISA NY 11 JONA 2021 a été récupéré chez Ministère de la Santé Publique.
Kolontsaina, tontolo iainana…: nivoaka omaly ny boky « Kolokitra »
Dingana lehibe no vita! Tontolo efatra be izao ny voarakotry ny boky « Kolokitra ». Miainga hatrany amin’ny zaza rahateo ireo hevi-dehibe nasongadin’ny mpanoratra sy ireo niara-niombon’antoka taminy…Kolontsaina, fitandroana sy fikajiana ny tontolo iainana, fampitiavana vakiteny, fanabeazana… Samy tazana ao anatin’ny boky « Kolokitra » navoaka, omaly tetsy amin’ny Tranombokim-pirenena Ampefiloha avokoa ireo. Nanamafy izany ny nambaran’Andriambolanoro Mireille Clémence, nanoratra ny boky: «… Boky mampita amin’ny ankizy fa azo atao tsara ny manangona ireny plastika ireny ho tonga kilalao, fitaizam-batana sy fanatanjahantena. Ahafahana mivelatra ao anatin’ny fiarahana, sns. Mampita amin’ny rehetra fa mila kolokoloina ny tanànantsika fa maloto loatra. Mila kajina ny tontolo iainana. Tenim-pirenena efatra (malagasy, anglisy, alema, frantsay » no nandikana ny tantara ao anatiny. Izany hoe, ahafahana mianatra tenim-pirenena ihany koa ity boky ity. Aza hadinoina hatrany ny fisokafan’ny zanatsika amin’ny any ivelany». Ankoatra ireo, nomarihin’Andriambolanoro Mireille Clémence fa « mitarika hanana saina tia karokaroka ny tahaka izao. Mety tsy ho ny plastika ihany ny akora ampiasain’ny ankizy fa mety ho zavatra hafa manimba ny tontolo iainana ihany koa na havadika ho mahasoa ».Nanterin’ny mpanoratra ihany koa anefa fa ilaina ny fifanohanana tsy hijanona hatreo amin’ny famoahana boky ny tahaka izao. « Mila haparitaka ny « Kolokitra » mba ho tonga any am-pelatanan’ny rehetra, indrindra fa ny zaza sy ny ankizy ary ny tanora miaraka amin’ny mpanabe sy ny mpampianatra. Mila fanampiana sy fifanohanana ny fanatanterahana izany », hoy hatrany Andriambolanoro Mireille Clémence.HaRy Razafindrakoto L’article Kolontsaina, tontolo iainana…: nivoaka omaly ny boky « Kolokitra » a été récupéré chez Newsmada.
Karibotel 26 Analakely: hanafana ny “After Work” ny tarika Ejema
Mikarakara “After Work”, amin’ity, anio, zoma 25 septambra, manomboka amin’ny 7 ora hariva ny Karibotel Twenty Six Analakely. Hanome hafanana amin’izany ny tarika Ejema,izay tsy zovina amin’ny maro intsony, anisan’ny andrarezin’ny kanto malagasy tsy lefin’ny vanimpotoana. Hovetsoina ao daholo ireo hira anisan’ny nanamarika ny tarika sy ny tena nahafantarana azy rehetra, toy ny “Djarina banou”, ny “Manahiragna”, ny “Aza ela any”, indrindra ilay hira vao vita rindrantsary “Zaza Gasy”… Hisy tsy ampoizina samihafa hanomezana fahafahampo ny mpanatrika amin’io “After Work” io, araka ny nambaran’ny tompon’andraikitra. Hisy sakafo sy tsakitsaky isan-karany amin’izany, matihanina rahateo amin’ny fahandroana sakafo malagasy sy ny fikarakarana lanonana ny Karibotel-Twenty Six Restaurant Bar Lounge eo anoloan’ny hotel de ville Analakely. Efa manomboka miverina tsikelikely ny karazana hetsika isan-karazany, indrindra ny faran’ny herinandro, na dia eo aza ny hamehana ara-pahasalamana.NarilalaL’article Karibotel 26 Analakely: hanafana ny “After Work” ny tarika Ejema a été récupéré chez Newsmada.
Club Peugeot 405: hahazo « kit » ny mpanala CEPE
Ankoatra ny fankafizana manokana ny fiara Peugeot 405, anisan’ny zava-dehibe ho an’ny fikambanana Club Peugeot 405 ny fanampiana ny mpiara-belona. Ny 25 aogositra izao, hanatanteraka fizarana fitaovam-pianarana (kit scolaire) ho an’ireo mpianatra hanala fanadinana CEPE avy ao amin’ny EPP Imerintsiatosika ny mpikambana ao anatin’ity fikambanana ity. Hizaran’izy ireo ankanjo ihany koa ireto ankizy 39 mianadahy ireto. Raha tsiahivina, efa nanatanteraka fambolen-kazo any Imerintsiatosika ihany koa ny Club Peugeot 405, ny 2 marsa teo.Manana ny teny faneva « Fialamboly, fifanampiana, fifampizarana » ity klioba ity. Ho fanatanterahana izany indrindra ny hanaovany asa soa tahaka izao. Niforona ny taona 2014 ny Club Peugeot 405 fa ny taona 2017 kosa vao nitsangana ara-panjakana izany. Mahatratra hatrany amin’ny 8 673 ankehitriny ny mpikambana ao anatin’ny klioba.HaRy Razafindrakoto L’article Club Peugeot 405: hahazo « kit » ny mpanala CEPE a été récupéré chez Newsmada.
Ady amin’ny Covid 19 – Moramanga: manampy antapitrisa maro ny Ambatovy
Nanohina ny antso nataon’ny CCOD* ao Moramanga ny ady amin’ny Covid-19 ny Ambatovy. Nanome fitaovana ilaina amin’ny fitsaboana, fanafody mamono tsimokaretina miaraka amin’ny fitaovana famendrahana ranom-panafody fanadiovana, fitaovana fampiasa any amin’ny birao, ary milina mamatsy herinaratra manana tanjaka 6 Kva, mitentina 26 tapitrisa Ariary mahery.Ny andiany voalohany, natolotra ny 16 avrily 2021, nahitana arotava karazany FFP2 sy “chirurgicaux”, arotanana sy akanjo fiarovana Tyvek. Nomena ny 23 avrily, ranom-panafody famonoana tsimokaretina Virokil 30 litatra, fitaovana enina famendrahana fanafody, ranom-panafody fanadiovana ary fitaovana fampiasa amin’ny birao.Fanampin’ireo fandraisana anjara efa nataon’Ambatovy ho an’ny ady amin’ny Covid-19 eto Madagasikara ireo fanomezana ireo. Ny taona 2020, efa nahatratra 1 087 368 027 Ariary ny sandan’izany fanampiana izany. Nandray fepetra eo amin’ny lafiny fahasalamana hentitra sy fepetra eo amin’ny lafiny fandrindràna ny fomba fiasa sy ny fampitaovana mahakasika ny fanatanterahana ny asa ihany koa Ambatovy ho fiarovana ny mpiasa sy hiantohana ny famokarana mba ho marin-toerana sy lavitra ny loza. R.Mathieu CCOD* : Centre de commandement opérationnel du districtL’article Ady amin’ny Covid 19 – Moramanga: manampy antapitrisa maro ny Ambatovy a été récupéré chez Newsmada.
Antanimora Ambovombe : Sokatra telo tratran’ny zandary
Nanao fisafoana ny zandary avy any Antanimora, ny alakamisy 15 jolay teo. Fa­naon’izy ireo ny manao iza­ny, indrindra andro tsena rahateo io fotoana io. Saron’ izy ireo ny sokatra vitsivitsy, saika hangonina tao amin’ny toerana iray atao hoe Andai­fozaky, fokontany iray any amin’ny kaominina Jafaro. Nanararaotra ny andro tsena sy ny fivezivezen’ny olona ireo olon-dratsy, ka nilefa nandositra raha vao naha­tsinjo ireo zandary avy lavitra. Tavela teo kosa ny sokatra miisa telo natao tanaty gony. Natao ny fisavana notarihin’ny kapiteny kaomandà kaompania Ambo­vom­be, ka nisy bisikileta roa koa naterin’ny fokonolona izay fantatra fa an’ireo olon-dratsy.Mandray an-tanana ity raharaha ity manao ny fanadihadiana ny borigadin’ny zandarimaria Antanimora. Nogiazana ireo bisikileta ary nomena ny lehiben’ny sampandraharahan’ny Tontolo iainana any Antanimora, omaly 16 jolay, ireo sokatra miisa telo ireo. Isaorana manokana ny zandarimaria, indrindra ny avy any amin’ ny kaompania Ambovombe sy ny borigady Antanimora amin’ny fanomezan-tanana manoloana ny ady amin’ny trafika sokatra any amin’iny faritra iny.Njaka A.L’article Antanimora Ambovombe : Sokatra telo tratran’ny zandary a été récupéré chez Newsmada.
Fisorohana ny Covid-19: hanamafy ny fiarovana ny sisin-tany ny miaramila
Manoloana ny fihanaky ny valanaretina Coronavirus manerana ny Nosy, indrindra ho an’ny ao amin’ny faritra Boeny sy ny Sofia, nanapakevitra ny avy eo anivon’ny miaramila fa hanetsika ireo ZDS na ny “Zone de Défense et Sécurité” roa ao Ankarafantisaka sy Ankarana hahafahana mifehy ny sisin-tany. Nosinganina manokana ny ao Nosy Be sy ny ao Boeny noho ny firongatry ny tsimokaretina. Maro ireo mpiavy avy amin’ny Nosy mirahavavy toy ny avy any Kaomoro no tonga miditra avy amin’ireo sisin-tany ireo ary isan’ny nampirongatra ilay karazana valanaretina vaovao antsoina hoe ”variant Sud africain”. Hisorohana ny tsy hisian’io tranga tahaka izay intsony, hanenjana ny fepetra sy ny fanaraha-maso ireo olona minia mandika ny lalàna napetraky ny fanjakana ny tafika any an-toerana.Tsiferana Randriatiana L’article Fisorohana ny Covid-19: hanamafy ny fiarovana ny sisin-tany ny miaramila a été récupéré chez Newsmada.